आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार तपाइको दिन कस्तो छ हेर्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > राशिफल > आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार तपाइको दिन कस्तो छ हेर्नुहोस्
admin September 27, 2018 September 27, 2018 राशिफल 0
तपाईंको खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ, अब हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुनेछ । धेरै दिनपछि आज साँझ पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जोहो हुनेछ । अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । पेसा र व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । मित्र र सहयोगीले तपाईंको सहायता गर्नेछन् । तपाईंका महत्वाकाङ्क्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन् । आजका लागि शुभअङ्क १ र शुभरङ्ग गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ अं अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमाआजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार तपाइको दिन कस्तो छ हेर्नुहोस् १० पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।